Yangoku, embindini, kwiFlethi yesiXeko soRhwebo - I-Airbnb
Yangoku, embindini, kwiFlethi yesiXeko soRhwebo
Indawo yokuhlala yabucala. Ngoku iyacocwa intsholongwane phambi kokungena. Ifulethi langoku kwindawo esembindini kwiSixeko soRhwebo, kufutshane neebhari ezininzi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukusuka kwiSikhululo saseQueen Street kunye nemizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka kwisikhululo esiphakathi. Kutshanje ihlaziywe kumgangatho ophezulu kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya obufunekayo kumava okuphumla okuphumla okanye ikhefu leshishini esixekweni. Jonga kwaye ujonge amaxesha anokuba bhetyebhetye njengoko ukufikelela kuyikhowudi.
Siqeshe abacoci ukuba bacoce intsholongwane phambi kokungena. Ikhitshi elikhanyayo nelinomoya elivulekileyo ikhitshi / indawo yokutyela / indawo yokuhlala enegumbi lokulala elikhulu elahlukileyo elikhulu kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu. Ibekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo esikhuselekileyo. Iifestile ezinkulu zemifanekiso kuwo omabini amagumbi zidala isiseko esiqaqambileyo esiqaqambileyo nesiphangaleleyo sokuba ujonge isixeko esiphilayo saseGlasgow. Iiradiyetha zale mihla ezilawulwa ngokwe-thermostatically kunye neglazing ephindwe kabini zikuvumela ukuba ugcine igumbi lipholile njengoko kufuneka.
4.89 · Izimvo eziyi-463
Andisoloko ndisedolophini. Andisoze ndize eflethini ngaphandle kokuba ndifuneka ngesizathu esithile. Ndive ukhululekile ukuba undithumelele umyalezo ngayo nayiphi na imibuzo malunga nefulethi okanye iGlasgow.